Igolide obsidian, ekwabizwa ngokuba yigolide sheen obsidian, sheen obsidian, ividiyo
tags egolide, Obsidian, Ndileka
Igolide ye-obsidian, ekwabizwa ngokuba yigolide ye-sheen obsidian okanye i-sheen obsidian ilitye elineepatheni zeebhombu zegesi, ezisele zisuka ekuhambeni kokuhamba kwe-lava, zilungelelaniswe ecaleni kweziseko ezenziwe njengoko ilitye elinyibilikileyo lalisihamba ngaphambi kokuphola. Ezi bhabhathane zivelisa iziphumo ezinomdla zikhangeleka ngathi sheen yegolide.
Igolide yegolide ebonakalayo yiglasi yentaba-mlilo evele ngokwendalo eyilwe njengelitye elingaphandle kwe-igneous.
Imveliso iveliswa xa iflishi yegqabi eligqithisiweyo ukusuka kwintaba-mlilo iphola ngokukhawuleza ngokukhula okuncinci kweekristalu. Ihlala ifunyanwa ngaphakathi kwimida yokuhamba kwerabha yento ebaleka yaziwa ngokuba kukuhamba kwethayile, apho ukumiliselwa kweekhemikhali, umxholo ophezulu we-silica kubangela ukubonakala okuphezulu okuthi, xa kupholile ngokukhawuleza, kwenziwe iglasi yendalo evela kumdaka. Ukuthintelwa kokungqubana kweatom ngokusebenzisa le lava ye-viscous icacisa ukungabikho kokukhula kwekristali. I-dhahabu ebonakalayo ebukhali ilukhuni, ayisi brittle, kwaye iamorphous, yiyo ke loo nto iqhekeza imiphetho ebukhali kakhulu. Kwixesha elidlulileyo lalisetyenziselwa ukwenza izixhobo zokusika kunye nokubhoboza kwaye bezisetyenziswa ngokwamayeza njengamachaphaza e-scalpel blade.
Ayisiyoiminerali eyinyani kuba njengeglasi ayisiyi-kristali, ukongeza, ukwakheka kwayo kwahluka kakhulu ukuba kungabekwa njengezimbiwa. Ngamanye amaxesha ihlelwa njenge mineraloid. Nangona i-golden obsidian ihlala imnyama ngombala, ifana namatye e-mafic anjenge-basalt, ukwakheka kwe-obsidian kuyinto felsic kakhulu. I-Obsidia iqulathe ikakhulu i-SiO2, i-silicon dioxide, iipesenti ezingama-70 okanye ngaphezulu. Amatye e-Crystalline anokwakhiwa kwe-obsidian abandakanya i-granite kunye ne-rhyolite. Kungenxa yokuba i-obsrian iyadibana kumphezulu womhlaba, ekuhambeni kwexesha iglasi iba ziinkristalu ezimiliswe kakuhle, akukho kufunyanwayo kufunyanwe mdala kunobudala beCretaceous. Oku kuqhekeka kwe-obsidian kuyakhawuleziswa bubukho bamanzi. Ukuba nomxholo wamanzi asezantsi xa kusenziwa into entsha, ngesiqhelo ingaphantsi kwe-1% yamanzi ngesisindo, i-obsidian iba nenkqubela phambili xa ityholwa ngamanzi aphantsi komhlaba, isenza i-perlite.
Indawo yegolide ebonakalayo
Ubusuku bokujonga ngobusuku
tags Obsidian, Ngobusuku obuzinkanyezi